Creative Writing » ၀မ်းစာ	40
Before says: (အဲ့ဒါ ဘယ်နားမှာလဲလို့တော့ … မမေးနဲ့….၊ လုံး ၀ မ ပြော ဘူး..)
Kaung Kin Pyar says: ငင့်..လေးခက မန်းလေးက ဟုတ်ဝူးလား…???
အလင်းဆက် says: တာရာမင်းဝေရဲ့ မြင်းစီးထွက်သော အိပ်မက်များကို
Kaung Kin Pyar says: ကောင်းကင်ပြာတော့ လျှာမပေးနိုင်ဘူး…။ ဒီလျှာလေးနဲ့ အတင်းတုတ်နေရဒါ…
Before says: မန်းမှာတော့ အဲလိုဟုတ်ဘူး ဆိုင်ခန်းနဲ့ အခွေတွေ စီကာရီကာ စင်တွေနဲ့ကို ထားပြီးရောင်းနေသေးလို့ ၀ယ်လို့လွယ်နေစဲပါဗျ။
Kaung Kin Pyar says: ဒါဆို လေးခဆီက ပြန်မှာမယ်……
Mr. MarGa says: အခွေလား
Kaung Kin Pyar says: အဟွတ်!!!
Mr. MarGa says: မန်းသား မန်းအကြောင်းကြွားတာ ဆန်းသလားကွယ်
Wow says: တဂျားလေး မမဂျီး ခွေစာရင်းမတ်စိပို့လိုက်မယ် ၀ယ်ပေးနော် ခေး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5021
Mr. MarGa says: ဟိုက်ရှ်…
ဖားသက်ပြင်း says: ​ကျော့်​ကို​လေ
မောင်ဘလိူင် says: အူးလေးမှာ ရှိလား ကျွန်တော် လာကူးချင်လို့ ဟီဟိ..။
Kaung Kin Pyar says: Whoopi Goldberg နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူတဲ့ မင်းသမီးပါတဲ့ကား…Lucy ဆိုတာလားတော့ တွေ့မိတယ်…
ဖားသက်ပြင်း says: အသားဖြူဖြူ
မြစပဲရိုး says: ဟိုဘက်မှာလဲ ဒါတွေ ရေးထားတယ်။
မောင်ဂီ ဘာရောဂါထနေပြန်ပြီမသိ။ ကင်းကောင်လေး
Kaung Kin Pyar says: English ကား ကောင်းကောင်းကြည့်ချင်တာ အရီးရ…။ မြန်မာကားတွေကလဲ ပေါတောချာတာ အက်ကြောင်းထပ်ပြီး ဇာတ်လမ်းအစကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ အဆုံးကို တန်းသိနေရောလား….။
Wow says: အင်တာဗျူးအခွေက စာတန်းထိုးအမှန် အကြည်တွေနဲ့ အနော်တောင်ကျိပီးတာကြာပေါ့ ရတာပေါ့အရီးရယ် ညန်မာအစိုးရဥပဒေကို မကြောက်တာ လမ်းဘေးခွေရောင်းသမားတွေပဲချိ… အဖမ်းခံရတာနောက် မရောင်းရရင် အယင် ထမင်းငတ်မာလေ…
ကင်းကောင်လေး ပေါသလို ၀မ်းစာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1988
Shwe Ei says: -ယင်းဂလိပ်ကားဒွေကို…ခိုးကူးမို့လို့ ဆိုပီး..ဖမ်းတာ သိမ်းတာတေ လုပ်ခိုင်းတဲ့ -သူဒွေကို..သိပ်သောက်ညင်ကတ်တာဘဲကွီ..
-အာ့ကားဒေ..မကျိလို့..သများတို့က..ညန်မာကား(သောက်ယူးကား..သောက်ပေါကား) ဒေကို..၀ယ်ကျိရမာလားလို့..(မှတ်ချက်..သေတောင်မ၀ယ်ဘူး..ဒဂယ်ပျော့စ်တာ) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: ဒဂယ် ဖမ်းသင့်တာဒွေကိုဒေါ့ လွှတ်လွှတ်ပေးပြီး…ဒဂယ် မ၀င်သင့်တဲ့လူဒွေကိုဒေါ့ ၀င်ခွင့်ပေးပြီး မရှိလို့လုပ်စားနေတဲ့သူဒွေကိုဒေါ့…ပုံကြီးချဲ့ပြီး ပတ်တနာလိုက်ရှာတာ…
manawphyulay says: အိုင်ဆေး ကိုနှင်းမောင်..
Kaung Kin Pyar says: အဲ့ မနော..
Mike says: .PK အခွေဝယ်ချင်ပါတယ်
Kaung Kin Pyar says: ဟုတ်တယ် အူးမိုက်…
ဦးကျောက်ခဲ says: ထိုင်းကလူတွေက လမ်းကြုံရင် တာချီလိတ်မှာ အခွေလာဝယ်တယ်…
Ma Ma says: သူများဝမ်းစာနဲ့ကြုံတုန်း သူ့သရီးစာကို လာကြွားနေတယ်။
နောင်ဆို ဖိုးစာ ဖိုက်စာပါ ရှာရမှာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: ဖမ်းတာက တကယ်လိုအပ်တာဆိုရင်ဖြင့် မြန်မာတပြည်လုံး ဖမ်းပေါ့လေ…။ ခုက ရန်ကုန်ချင်းအတူတူတောင် တစ်နေရာက ခိုးရောင်း၊ တစ်နေရာက အဖမ်းခံရ…ဟော့…နောက်တစ်နေရာကျ ပလက်ဖောင်းတင် ပေါ်တင်ရောင်းတာ….။ အိုက်ဒါ သွားရလှ ဘက်စ်ကားမှတ်တိုင်လေး ၆ ခုစာလောက်နေရာတွေ…
ဂျက်စပဲရိုး says: သွားရမှ ဘတ်စ်ကားလေး ၆ မှတ်တိုင် ဆိုတော့ကာ လှည်းတန်း ပဲ ဖြစ်ရမယ်… ဒန်တန့်ဒန်…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1086
အာဂ says: သေချာတာက ဆူးလေနားတစ်ဝိုက်ပဲ။
Kaung Kin Pyar says: ဆက်စပ်စဉ်းစားတာတွေ သိပ်များနေပြီ ကိုစံအာဂ…
kai says: လော့ကျတဲ့ကျလိကျလိအိမ်မှာ… တချို့လူတွေ(အဓိကအားဖြင့်အမဲတွေ) အဲလိုဒိုင်လေးနဲ့အခွေရောင်းသဗျ..
ပြောရရင်.. အဲဒီလိုအခွေရောင်းနေတာတွေက.. ဟောလိဝုဒ်နဲ့၁၀မိုင်တောင်မဝေး..။ များသောအားဖြင့်.. ရုပ်ရှင်ကိုကင်မရာထောင်ရိုက်ထားတာတွေမို့..
Kaung Kin Pyar says: သဂျီးတို့ တိုင်းပြည်မှာလဲ ဒါမိုးတွေရှိတာပဲလား…..။
uncle gyi says: သူတို့ရှာတဲ့ဝမ်းစာက
naywoon ni says: အဲ့ ဟို အ​ခွေ​တွေ​ကောရှိလားဟင်​ ! လက်​ပံ​တောင်း ပြဿနာတို့ မိတ္ထီလာ အဒိကရုံးတို့ လက်​ပံ​တောင်း ​သပိတ်​တို့ ​ပြောဒါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: အခွေမကျိနဲ့ ကိုယ်တိုင်သွားကျိပါလား ဆြာနီ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3663
naywoon ni says: ​သွေးရဲရဲ သံရဲရဲ မကြည့်​ရဲလို့ ဆရာဝံ မလုပ်​ခဲတာ ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3713
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဒီရက်ပိုင်း ပြန်ရနေပြီကော… နော်…
တညင်သား says: ဒါ သူခိုးအားပေးတာ….
Kaung Kin Pyar says: ဆြာနေ….ဘုန်းကြီးအရေးအခင်း ကြည့်ပြီးကတည်းက စိတ်ထိခယှက်လို့…အရေးအခင်းဗွီဒရိုဒွေဆို အင်တာနက်မှာ တွေ့တောင် လက်ရှောင်ဖြစ်နေတာ…။ သာမီးက အတဲငယ်ဒယ်…ငိငိ..